काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालले मलेसियासँगको दुई अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी सिरिजमा ऐतिहासिक क्लिनस्वीप गरेको छ ।
आइतबार दोस्रो रोमान्चक खेलमा मलेसियालाई ६ रनले पराजित गर्दै नेपालले २-० ले सिरिज क्लिनस्विप गरेको हो । पहिलो खेलमा शनिबार नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । आइतबार १ सय ७४ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली मलेसिया २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १ सय ६७ रन बनाउन सक्यो । अन्तिम ओभरमा जितका लागि १४ रन चाहिएको अवस्थामा अभिनाश बोहोराले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि नेपालले रोमान्चक जित हात पारेको हो । ऐतिहासिक क्लिनस्वीपसँगै नेपालले यी ३ नयाँ कीर्तिमान पनि रचेको छ ।
३. सर्वाधिक उच्च स्कोर
टी ट्वान्टी आईमा नेपालले आज मलेसियासँग बनाएको १ सय ७३ रन हाल सम्मकै उच्च स्कोर हो । यस अघि सन् २०१४ को टी ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा हङकङविरुद्द बनाएको १ सय ४९ रननै नेपालको टी ट्वान्टी आईमा उच्च स्कोर रहँदै आएको थियो ।
२. विनोदको सर्वाधिक छिटो अर्धशतक
विकेटकीपर तथा आक्रामक ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारीले टी ट्वान्टी क्रिकेटमा नेपालबाट सर्वाधिक छिटो अर्धशतक पुरा गर्ने रेकर्ड बनाएका छन् ।
मलेसियासँगको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा २५ बलमै ५ छक्का र ३ चौका सहित ५१ रनमा अविजित रहे । यसअघि टी ट्वान्टी आईमा नेपालबाट सर्वाधिक छिटो अर्धशतक पुरा गर्ने रेकर्ड पारस खड्काको नाममा रहेको थियो । पारसले शनिबार मात्रै मलेसिया पहिलो खेलमा ३२ बलमा पुरा गरेका थिए । टी ट्वान्टी आईमा विनोद नेपालबाट अर्धशतक पुरा गर्ने चौथो खेलाडी हुन् ।
१. पहिलो पटक क्लिनस्वीप
नेपालले मलेसियासँगको दुई अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी सिरिजमा ऐतिहासिक क्लिनस्वीप गरेको छ । आइतबार दोस्रो खेलमा मलेसियालाई ६ रनले पराजित गर्दै नेपालले २-० ले सिरिज क्लिनस्विप गर्न सफल भएको हो । पहिलो खेलमा शनिबार नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । नेपालले पहिलो पटक टी ट्वान्टी आई सिरिज क्लिनस्वीप गर्न सफल भएको हो ।
नेपालले पहिलो टी ट्वान्टी आई सिरिज सन् २०१५ मा हङकङसँग खेलेको थियो । पाँच टी ट्वान्टी उक्त सिरिज वर्षाको कारण ४ खेल रद्द हुँदा १-०ले हारेको थियो । सन् २०१५ मै ग्लोवल विश्वकप छनोट अघि नेदरल्यान्डसँगको चार टी ट्वान्टी सिरिज ३-१ ले गुमाउन पुग्यो । गतवर्ष लर्ड्समा नेपाल, एमसीसी र नेदरल्यान्डसँगको त्रिकोणात्मक टी ट्वान्टी सिरिज नेदरल्यान्डसँग बाँडेको थियो । नेपालले गत माघमा यूएईलाई २–१ ले हराउँदै पहिलो ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी सिरिज जितेको थियो ।